MALUNGA US - Shanghai Long Jie Plastics Co., Ltd.
IVinyl yabucala yeCingo lokuBiya
Ikhithi yocingo lwepikethi
Icandelo lokubiya leAluminiyam
Isango labucala locingo olumhlophe
Icandelo leClass Vinyl Railing
Preassembled elihamba ngomgaqo
Iimilo ezininzi zithuka iPost Post
ucingo ihashe & CUSTOM
PVC Classic Horse Kucingo olubiyele
Ukuhombisa kunye nezinye iimveliso
Ukukhanya kwendlela yelanga engenasiseko
IPlati yangaphandle yoLuhlu lweNdonga
I-PVC Vinyl yangaphandle yePlastiki yokuHamba
IZINTO ZOKWAKHA IZINTO ZE-PVC
NGAPHANDLE & GADINI
Inkampani Shanghai Long Jie Plastics Co., Ltd.
Singobani kwaye Senza Ntoni？
Iiplastikhi zaseShanghai Longjie ngumvelisi oqeqeshiweyo weemveliso zePVC extrusion. Kunye iminyaka engaphezu kweshumi kushishino kunye namava kumazwe angaphandle, siphuhlise iimveliso zethu ububanzi ukuya Ukuthuka i-PVC, ukubiyela, i-vinyl siding, ukuhombisa, i-gutter yemvula, i-PVC yokubumba kunye nentsimbi kunye i-aluminium railing, njl Iqela elide le-Jie liza kusebenza kwi-R & D kwaye libonelele ngezisombululo kubuchule kubathengi bethu kwihlabathi liphela ngeemveliso zethu kunye neenkonzo. Siqinisekile ukuba uLong Jie uya kuba liqabane lakho elilungileyo kwaye sijonge phambili ekusebenzisaneni nawe!
Umatshini wokuvelisa we-Hi-tech
Imigca yokuvelisa i-extrusion eyi-12, umthamo we-extrusion yemihla ngemihla umalunga neetoni ezingama-30, ipelletizer enye kunye nomatshini wokuxuba ozenzekelayo. Iiseti ezi-2 zoomatshini bejigsaw ezenzekelayo, iiseti ezi-2 zomatshini wokukrola, iiseti ezi-3 zoomatshini abangafakwanga, iiseti ezi-2 zomatshini wokucheba oluzenzekelayo, iseti yomatshini wokusika,
Sineenjineli ezi-5 kwiziko lethu le-r & d. Bangabaphathi abaziingcali bonke baneetalente ezihlanganisiweyo kunye neminyaka emininzi yamava entlalontle kunye nomsebenzi. Bazibandakanya nolawulo lweshishini, ucwangciso lokuthengisa, ukuthengisa, urhwebo lwamanye amazwe, uphuhliso lwemveliso kunye nezinye izinto eziphambili. Bayazazi iindlela zolawulo lweenkqubo ezahlukeneyo zoqoqosho.
Iimpawu eziqhelekileyo zamalungu eqela lolawulo:
Imvelaphi yezemfundo: Isidanga sekholeji okanye ngaphezulu, ishishini elinamandla,
Amava omsebenzi: Iminyaka emininzi yamava entlalontle kunye namava omsebenzi, inentsebenzo engaqhelekanga kwicandelo lobungcali kunye namandla amangalisayo okuziqambela izinto ezintsha.
Ubudlelwane phakathi kwabantu: Yiba nomdlandla kunye nobudlelwane phakathi kwabantu.
Umgangatho wobungcali: Imfezeko, landela injongo yemigangatho yenkampani, bathobele imithetho yelizwe kunye neenqobo zokuziphatha.
Ilungu eliphambili leqela:
Liu lei: Umlawuli wezobuchwephesha wenkampani
UMlawuli wophuhliso lwenkampani kunye noyilo
Ulawulo loMgangatho olungqongqo
I-ipqc eyi-1 enobuchule enezakhono zeshishini kwicandelo le-extrusion kunye nokupakisha;
2 sinenkqubo epheleleyo yokuqinisekisa ukuvelisa imveliso ekumgangatho ophezulu;
Sinika abasebenzi inkuthazo ngokwendlela abasebenza ngayo;
5 sinenkqubo epheleleyo yokuhlola umgangatho wemveliso, iiyure ezi-2 zohlolo olubanzi kunye nokuhlolwa okungaqhelekanga, ingxelo ekhawulezileyo xa kufunyanwa iingxaki, kwaye ulandele inkqubo yokusombulula ide ingxaki isonjululwe ngokupheleleyo, kwaye ubhale iingxelo ezingaqhelekanga zoqeqesho lomgangatho wexesha lokwenyani idatha;
6 sihlala siqeqeshwa ngabasebenzi abasemgangathweni ukuphucula izakhono zethu kunye neempawu zokuziphatha, ukubakhuthaza ukuba baqiniseke ukuba yonke into abayenzileyo iyahlangabezana nemigangatho
7 sisebenzisa iindlela ezininzi zokuvavanya umgangatho wemveliso.
1.) iindlela zokuhlola ngokwasemzimbeni, siye phambili koomatshini umqadi cantilever umqadi, ukuwa koomatshini uvavanyo ibhola, rockwell abavavanyi yobulukhuni, oomatshini eqine, njl .;
2.) iindlela zokuhlolwa kweekhemikhali, i-oveni lobushushu rhoqo, uvavanyo lokuguga, imitha emhlophe;
3.) iindlela zokuhlola zebhayoloji. Sisoloko sibeka iimveliso zethu kuvavanyo yiarhente yovavanyo yomntu wesithathu enengxelo yovavanyo; ikwafuna ukuba umboneleli abe nengxelo yovavanyo ebonakalayo.
4.) uhlobo lwemveliso yokulinga, ulingelo oluqhelekileyo, ulingelo lwesampulu, njl .;
5.) iindlela zokuvavanya uvakalelo, amalungu eqela lokuvavanywa komgangatho zizandla ezindala ebezisebenzela inkampani iminyaka emininzi, zinamandla okwahlula iingxaki zomgangatho wemveliso yethu; kwisampulu, iisampulu ezibonisa iimpawu zemveliso zinokufakwa ngokuchanekileyo kuvavanyo lweenjongo zesayensi.
Ukuwa komvavanyi webhola
Umatshini wokuvavanya ifuthe leCantilever
Ibhokisi emhlophe yokukhanya kombala
I-oven yobushushu rhoqo
Imveliso yokuBonisa amandla
Oomatshini bethu be-extrusion bonke bathengiwe kwifom yejinwei oomatshini co., Ltd., Usekela sihlalo wombutho weplastiki woomatshini basekhaya e-china. Sinezixhobo ezilishumi elinesibini ezingama-65 zoomatshini bokuxhuma kunye nohlobo loomatshini abancedisayo abangama-45, kwaye umgca ngamnye wokuvelisa unemveliso yemihla ngemihla yeetoni ezi-3 zemixube ye-pvc. Ukugqitywa kwendibano yokuphela yangasemva kunye necandelo lokupakisha lixhotyiswe ngomatshini omkhulu, kunye nabasebenzi abanezakhono ezingama-40, ezinokuthi zisebenzise ngokupheleleyo amandla okuphambili angaphandle; Ukuqinisekisa amandla emveliso yemihla ngemihla yeetoni ezingama-30 zeemveliso.
Malunga nolawulo lomgangatho:
Umboniso wefektri iyonke:
Umsebenzi wokubonisa umsebenzi:
Umboniso wokupakisha umsebenzi:
Amandla obuchwephesha kunye noyilo kunye namandla e-r & d
Ukusukela oko yasekwa, besisoloko sihambelana nengqondo yophuhliso lwenzululwazi, sithatha uphando lwetekhnoloji kunye nophuhliso kunye noqeqesho lwabasebenzi njengeenjongo zethu zophuhliso. Sinesebe le-r & d elizinikeleyo, elithembele kwinkxaso yobuchwephesha evela kwikomkhulu lase-shanghai, kwaye linamava atyebileyo kunye nabasebenzi be-r & d yobugcisa. Sinamathela kubaluleke kakhulu kuphando kunye nophuhliso lweemveliso ezintsha okanye iinkqubo ezintsha, sinika imali kwisixa esikhulu sophando nophuhliso minyaka le, siphumelele iziphumo ezigqwesileyo, kwaye sifake izicelo zamalungelo awodwa abenzi.
Kuphando lwemveliso nophuhliso, someleza ukutshintshiselana kunye nentsebenziswano namaziko ophando lwasekhaya ngokungqinelana nophuhliso lwetekhnoloji kunye nemfuno yentengiso. Guqula iziphumo zophando lwezenzululwazi zibe yimveliso ngokuzisa itekhnoloji kunye nophuhliso lwentsebenziswano, kunye nokudala izibonelelo kumashishini. Okwangoku, siphuhlise iintlobo ezahlukeneyo zokubiyela kunye neendawo zokugada ezifanelekileyo kwiindawo ezininzi, kubandakanya igadi, ukhuseleko lwangaphakathi, inkundla, iipaki, iifama zamahashe kunye nezinye iintlobo zeeyunithi, ukuze iimveliso zithengiswe ngokupheleleyo e-europe, eunited States, eustralia , i-zealand entsha kunye ne-mpuma ye-asia. Phantsi.
Sisekele uphando lwentsebenziswano lwexesha elide kunye nobudlelwane nophuhliso kunye neqela le-anhui, kwaye siqhube uphando olunzulu kunye nophuhliso lweempawu ezibonakalayo kunye neekhemikhali zokwenziwa kweprofayili yangaphandle, kwaye siphumelele. Kwaye kwintengiso kunye nokusetyenziswa kwintengiso, umthengi wanelisekile kwaye uye waqondwa ngamxhelo mnye ngumthengi.
Inkqubo yeR & d yeNkampani
1) emva kokufumana umyalelo we-r & d, isebe lobugcisa liququzelela uyilo kunye neqela lophuhliso, limisela inkokeli yoyilo, lenza isicwangciso sokuyilwa kwe-r & d, kwaye lilungiselela "uyilo nophuhliso lwesicwangciso"
2) umntu ophethe uyilo umisela umxholo wezixhobo ezahlukeneyo zobuchwephesha ngokwecebo loyilo kunye neempawu kunye neemfuno zemveliso, unxibelelana nonxibelelwano lobuchwephesha kubo bonke abayili, kwaye uhlanganisa "uluhlu loyilo kunye nophuhliso lokufaka".
3) uyilo loyilo lwesikimu semveliso ngokogalelo loyilo. Umlawuli wezobuchwephesha wabiza abasebenzi abachaphazelekayo ukuba baqhubeke nesiboniso. Emva kokuba isicwangciso sidlulisiwe, umntu ophethe uyilo wenza uyilo lobuchwephesha ngokwesicwangciso esivunyiweyo, kubandakanya imizobo kunye neenkqubo, kwaye uququzelela abasebenzi abafanelekileyo ukuba baphonononge uyilo, benze iirekhodi, kwaye balungiselele "Ingxelo yoPhononongo loyilo kunye nophuhliso".
4) umyili wenza uvavanyo lokuqinisekisa kwimveliso esekwe kwisiphumo sokuphononongwa, kwaye ulungisa "ingxelo yoyilo kunye nophuhliso lokuqinisekisa"
5) emva kohlobo lovavanyo lwemveliso lufanelekile, umyili uzokuzoba imveliso yokuqhutywa kwemveliso kunye nemiyalelo yenkqubo yokuvelisa, inkokeli yoyilo iya kuthi iphonononge, kwaye umlawuli wezobuchwephesha uya kuyikhupha emva kokuvunywa, kwaye alungiselele "uluhlu loyilo nophuhliso".
6) emva kokuba imveliso yamaxwebhu obuchwephesha ikhutshiwe, isebe lezeshishini libeka iodolo yeesampulu, kwaye isebe lemveliso lenza iisampulu ngokwamaxwebhu obuchwephesha; abaqulunqi bahlalutya kwaye babonise iisampulu kwaye benze isishwankathelo semveliso yesilingo.
7) emva kokuba imveliso yesampulu yesampulu iphumelele, imveliso yebhetshi encinci iya kwenziwa. Umntu ophethe uyilo uqinisekisa ukusebenza kwemveliso kunye nezalathi zobuchwephesha ngovavanyo lobuchwephesha bemveliso kunye nengxelo yomsebenzisi, kwaye ulungisa "Ingxelo yoyilo kunye nophuhliso yokuqinisekisa".
8) emva kokuba uyilo lugqityiwe, umntu ophethe uyilo uhlala enika ingqalelo ekusetyenzisweni kweemveliso ezintsha kwaye eqhubeka ephucula iimveliso ezintsha.
Ukuseka "uMthengi-centric" kwinkcubeko. Izinto ezintandathu zenkcubeko yokudibanisa: Ixabiso, umgangatho, inkonzo; Iinjongo, inkqubo kunye novavanyo. Ukuyilwa kwetekhnoloji kunye nolawulo loyilo oluqhutywa kuyo yonke inkqubo yokwakha inkcubeko.
Ukujongana nemeko entsha kunye namathuba amatsha, u-suzhou langjian ubeke uluvo lobuchule "lweshishini le-Century, ukwenziwa kwekhulu leminyaka, uphawu lwekhulu".
I-1) isicwangciso samazwe aphesheya sitshintshile ukusuka kwishishini labucala lamaTshayina labucala laya kwishishini langoku elineemveliso zamanye amazwe kunye nemveliso yobungcali kunye nokusebenza nokusebenza
2) isicwangciso sokungena kweemarike -hlengahlengisa ukubekwa kwindawo ekujoliswe kuyo.
3) iqhinga lophuhliso lwemveliso-ukuphuhlisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu
INkcubeko yeNkcubekoIqela labaFoto Ifoto
Ukuboniswa kweMeko yeProjekthi
Umboniso wamandla oMboniso
Ukuqala ngokwenza ingeniso ngakumbi namhlanje!
# C, inombolo 1305, i-Huajiang Road, isithili saseMinhang, iShanghai, China